आज हनुमानको आराधना गरे के के फाइदा हुन्छ ? जान्नुहोस् – PathivaraOnline
Home > धर्म सँस्कृति > आज हनुमानको आराधना गरे के के फाइदा हुन्छ ? जान्नुहोस्
आज हनुमानको आराधना गरे के के फाइदा हुन्छ ? जान्नुहोस्
admin September 15, 2020 धर्म सँस्कृति	0
मंगलबारलाई पवन पुत्र श्रीहनुमानको दिनका रुपमा मानिन्छ । यस दिन हनुमानको आराधना गरे बौद्धिक क्षमता वृद्धि, शत्रु पराजति, शारीरिक पीडा लगायतका सबै प्रकारका कष्टबाट मुक्ति पाइने विश्वास गरिन्छ ।
यदि कुनै ब्यक्ति अपराधका कारण कारागार जीवन बिताइ रहेको छ भने संकल्प लिएर क्षमा प्रार्थना गरी भविष्यमा कुनै पनि प्रकारका कुकर्म नगर्ने वचनसहित हनुमान चालीसाको १०८ पटक पाठ गरेमा उसको कारागार जीवन छोटिने धार्मीक मान्यता छ ।
हनुमानको कृपा भएमा शनि र यमराजले समेत कुनै हानी पुर्‍याउन सक्दैनन् । त्यसैले शनि ग्रहको पीडाबाट छुटकारा पाउने चाहाना भएमा हरेक मंगलबार हनुमान मन्दिरमा गई हनुमान चालीसा पाठ गर्नुहोस् । साथै शनिबारका दिन सुन्दरकाण्ड वा हनुमान चालिसा पाठ गरेमा शनि भगवानको समेत कृपा प्राप्त हुन्छ । तर मंगलबार र शनिबार भुलेर पनि मदिरा वा मांसाहारी भोजन गर्नुहुदैन ।
कुनै रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ वा घरमा कोही बिरामी छ भने हनुमानजीको प्रतिमा सामु जलको एक पात्र राखेर २६ वा २१ दिनसम्म नियमित हनुमान चालिसाको पाठ गरे रोगबाट मुक्ति मिल्ने धार्मीक विश्वास छ । उक्त जललाई हरेक दिन ग्रहण गर्नुहोस् र भोलीपल्ट अर्को जल राख्नुहोस् ।
रमाइलो खेल हो भन्दै १४ वर्षीया बालिकासँग यी पुरुषले गरे यस्तो घीनलाग्दो हर्कत… हेर्नुस्
गुणवती नारी पाउन शरीरमा खोज्नुहोस यस्ता गुणहरू…
आज शुक्रबार, सन्तोषी माताकाे ब्रत बसी यी कार्यहरू गरे मिल्नेछ धनलाभ!
धनी हुने मन छ भने त्याग्नुहाेस यस्ता नराम्रो बानीहरू…